Hashtag Myanmar - Sharing, The Value Living.
Windows 10 က Chrome နှင့် Mozilla Firefox ကို Install မလုပ်ဖို့ သတိပေးချက်များထွက်ပေါ်လာ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်မှုအများဆုံးနေရာ (အသည်းငယ်သူများမကြည့်ပါနှင့်)
ကမ္ဘာကျော် စူပါဟီးရိုးသရုပ်ဆောင်များနဲ့ သူတို့ရဲ့အစားထိုး စတန့်သရုပ်ဆောင်များ (ဓာတ်ပုံ)
Sharing, The Value Living.
hsdadmin - September 14, 2018 September 14, 2018
Mocrosoft Edge ဟာ Internet Explorer ကို အများကြီးအဆင့်မြှင့်တင်ထားတယ်ဆိုတာကို ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Windows 10 အသုံးပြုသူအများစုဟာ Google Chrome နဲ့ Firefox ကိုသာ အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ StatCounter ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ ကမ္ဘာ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ၆၀% လောက်ဟာ Google Chrome ကို သုံးစွဲနေကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ နောက်မှာ Microsoft [ … ]
hsdadmin - September 11, 2018 September 11, 2018
လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့ကြတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ကြမှာပါ။ သေဆုံးခြင်းဟာ ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့ လူတွေအဖို့တော့ လောကဓံကို အရှုံးပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ အခု HM ပရိသတ်ကြီးကို တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုအများဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ နာမည်ကျော် ဖူဂျီတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ Aokigahara တောအုပ်အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Aokigahara တောအုပ်ဟာ [ … ]
hsdadmin - September 8, 2018 September 8, 2018
HM ကို လာဖတ်ကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေထဲမှာ Super Hero ဖန်တွေရှိကြလားခင်ဗျ။ ကျနော်ကလည်း Super Hero Movies တွေကို အသည်းစွဲကြိုက်တဲ့လူပါပဲ။ အခု တင်ဆက်ပေးမယ့် ပုံတွေကတော့ စူပါဟီးရိုး သရုပ်ဆောင်များနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ အသည်းတစ်ယားယားနဲ့ ကြည့်ရမယ့် အန္တရာယ်များတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ သူတို့နေရာကနေ အစားထိုးသရုပ်ဆောင်ပေးကြတဲ့ စတန့်သမားသရုပ်ဆောင်တွေ အတူတူ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါပဲ။ [ … ]
hsdadmin - September 6, 2018 September 7, 2018
စပရင်ဖနောင့် “ဂျက်” ဟု ကျော်ကြားသော ပုံပြင်သဖွယ် ထူးထူးခြားခြားလူသတ်ကောင်တစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်းသည် ၁၈၃၇ ခုနှစ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဗစ်တိုရီးယားခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များနှင့် စကော့တလန်နိုင်ငံအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်လွှား မှတ်တမ်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၁၈၃၇ ခုနှစ်အစောပိုင်း တွင် နီရဲသောမျက်လုံးများ၊ လက်သည်းရှည်များရှိသည့်လက်များဖြင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ လူတစ်ယောက်ကို လန်ဒန်ဆင်ခြေဖုံးရှိ အိမ်ခေါင်မိုးများအပေါ် [ … ]